आँखाको क्यान्सर कति खतरनाक ?
Mon, Dec 17, 2018 | 19:48:46 NST
17:47 PM ( 10 months ago )
Total Views: 4.1 K
डा. रोहित सैँजु
एक दशक अगाडि अलि कम र अहिलेको दशकमा एकदम धेरै सुनेको रोग क्यान्सर हो । शरीरको विभिन्न अंगहरु फोक्सो, आन्द्रा, कलेजो, पाठेघर, स्तनलगायतमा क्यान्सर भए जस्तै आँखामा पनि क्यान्सर हुन्छ ।
आँखामा हुने क्यान्सरको बारेमा कम जानकारी भएको पाइन्छ, अरु क्यान्सरमा भन्दा यो क्यान्सर हुने जोखिमयुक्त कारक तत्वहरु फरक छन् । धुम्रपान, मध्यपान भएमा फोक्सोमा क्यान्सर, घाममा धेरै बसेमा छालाको क्यान्सरको जोखिम हुन्छ तर आँखाको क्यान्सर लाग्ने कारणहरु पनि छन् । आँखामा क्यान्सर भएको सुरुमा नै थाहा पाएमा आँखाको दृष्टि क्षमता जोगाउन सकिन्छ ।
आँखाको कुन कुन भागमा क्यान्सर हुन्छ ?
आखाँको डिल, परेला वरीपरी
आँखालाई रंग दिने तन्तुको क्यान्सर
आँखाको पर्दाको क्यान्सर
२. रसायनमा काम गर्ने व्यक्तिलाई,
३. धेरै घाममा काम गर्दा आँखाको डिलको क्यान्सर
४. रेडियसको सम्पर्कमा आँउदा (एक्स–रे, सिटीस्क्यान)
५. वंशाणु कारण
आँखाको सबै भागमा क्यान्सर हुन्छ, क्यान्सर हुन विशेष कारण नै चाँहिदैन । शरीरमा भएका कोषको बन्ने प्रक्रियामा गडबढ भई अनियन्त्रित रुपमा विकास हुने प्रक्रिया हो । यसलाई मेडिकल भाषामा म्युटेशन भनिन्छ । बाहिरी भागमा आँखाको डिल, परेला वरपर क्यान्सर हुन सक्छ । आँखाको क्यान्सर गराउने कारण मध्ये एउटा कारण घाम पनि हो । आँखाको माथिल्लो भन्दा तल्लो डिलमा क्यान्सर हुने जोखिम धेरै हुन्छ ।
आँखाको डिलमा क्यान्सर भएमा परिवर्तन देखिन्छ, मासु बढ्ने, घाउ आउने आदि हुन्छ ।
भित्र भागमा हुँदा
दृष्टि क्षमता कमजोर हुँदै जाने
आँखाको आकार बढ्दै जाने
आँखामा आएको घाउँ लामो समयसम्म निको भएन, रगत आएको
आएई गरिरहेमा, परेला झरेमा
यस्ता लक्षण आँखाकै अरु रोग लागेका बेलामा पनि देखा पर्छन् । अरु नै रोग होला भनि चुप बस्दा यसले आँखाको दृष्टि क्षमता नै गुम्ने तथा ज्यान नै जाने खतरा पनि हुन्छ । यस किसिमका लक्षण देखिनासाथ अस्पतालमा जानु पर्छ ।
कुन चरणमा निको हुन्छ ?
कुनै पनि रोग लागेपछि कुन चरणमा उपचार गर्दा रोग निको हुन्छ भन्ने भन्दा पनि रोग लाग्न नै नदिनु बुद्धिमानी हो । तर हाम्रो समाजमा रोगले जबसम्म गाह्रो अवस्था निम्त्याउँदैन, तबसम्म अस्पताल जाने चलन छैन । धेरै बिरामी धेरै गारो भएपछि आउने गर्छन् । पहिलो चरणमा नै भेटियो भने निको हुन सक्छ । क्यान्सरको चरण हेरेर त्यसै अनुसारको उपचार गरिन्छ ।
क्यान्सर र दृष्टि क्षमता
आँखाको बाहिरी भागमा जस्तै आँखाको डिलमा क्यान्सर भए दृष्टि क्षमता कम हुन समय लाग्छ, तर आँखाको भित्री भागमा क्यान्सर हुनासाथ दृष्टि क्षमतामा ह्रास आउँछ ।
आँखाको क्यान्सरको उपचार गर्दा पहिला जीवन, दृष्टि अनि आँखा क्रमशः बचाउने भन्ने गरिन्छ । दृष्टि जान्छ भनेर उपचार नगर्दा ज्यान जाने जोखिम बढी हुन्छ । रोगले संक्रमण गरेको भागअनुसार कुन–कुन अंग जोगाउन सकिन्छ भन्ने हुन्छ । धेरैको आँखा नै निकालेर उपचार गरिने हुँदा दृष्टि क्षमता गुम्न सक्छ ।
आँखाको क्यान्सर जन्मजात पनि हुन सक्छ । भर्खर जन्मिएका नानीहरुको जन्मेको ५ वर्ष भित्र आँखाको कालो भागमा सेतो टीका देखियो भने क्यान्सर हुन सक्छ, यदि सेतो टीका देखिनासाथ उपचार गराएमा ज्यानसँगै, आँखा र दृष्टि पनि जोगाउन सकिन्छ ।
आँखाको क्यान्सरको उपचार धेरैजसो शल्यक्रियाबाट हुन्छ । कुनै–कुनै अवस्थामा औषधि खाएर मात्र पनि उपचार सम्भव हुन्छ । उपचार गर्नु भनेको क्यान्सरलाई पूर्णरुपमा निकाल्नु हो, यसको प्रक्रियामा आँखालाई नै निकालेर फाल्नुपर्ने हुन्छ । यसले शरीरमा अपांगता हुन्छ । जसले गर्दा विरामीलाई हतोत्साहि बनाउन सक्छ । यसको लागि कृत्रिम आँखा प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ । क्यान्सर दोहोरिन पनि सक्छ त्यसैले नियमित अस्पतालमा फलोअपमा आइराख्नुपर्छ ।
आँखा जीवन हो, यसले हामीलाई डोहोर्‍याएको हुन्छ । आँखालाई हामीले हेरचाह ग¥यौँ भने आँखाले हामीलाई हेरचाह गर्छ । त्यसैले,
६ महिनामा एकपल्ट अनिवार्य आँखा परिक्षण
असामान्य लक्षण देखा पर्ने वित्तिकै आँखाको परिक्षण गर्नुपर्छ ।
आँखा अरु अंग भन्दा संवेदनशील अंग हो । आँखामा केही समस्या आएमा पहिला छिमेकीलाई सोध्ने, साथीलाई सोध्ने अनि मात्र अस्पताल जाने भन्ने तिर नलागौँ ।
(तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोहित सैँजुसँग उज्यालोको लागि सुजाता खत्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित)